Iwo Akanakisa Ecommerce Sites 2016-2017 | ECommerce nhau
Akanakisa Ecommerce Sites 2016-2017
Iwe une zvinhu zvaunochengeta uye unoda kuwana purofiti pane kuzvirasa? Hauna nguva yekuronga garaji kutengesa? Iwe unoda here kutenga chigadzirwa chitsva usingabve pamba? Ipapo zvirokwazvo iwe uchave unofarira kuziva akanakisa mawebhusaiti kuita yako kutengesa / kutenga zvigadzirwa; Aya ndiwo akanakisa ecommerce masaiti 2016-2017 nhasi.
Iwo akatanga se diki remunharaunda rekutengesa chirongwa muna 1995, Craigslist yakave yakakurumbira muUnited States uye yakazove chiitiko chenyika dzese chiripo munyika dzakasiyana siyana. Iyo yakanaka sarudzo yekutengesa uye kutenga masekondi-zvigadzirwa zvakaita semafoni, vhidhiyo yemitambo yekunyaradza, mabhuku, nezvimwe.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko uye vintage maitiro, Etsy ndiyo ecommerce saiti yako. Yakatangwa mu2005, Nhasi Etsy ane vanopfuura mamirioni 1.4 vatengesi vanoshanda. PaEtsy unogona kutenga uye kutengesa zvigadzirwa zvinonakidza zvakagadzirwa nemaoko, zvine musiyano uye unokwezva maitiro.
"Tsvaga zvese kunze kwekujairika." Ndiwo mutauro weBonanza, iyo Ecommerce saiti kwaunogona kuwana kubva kune zvakajairika zvigadzirwa. Zviri nyore kushandisa, kana iwe uchida kugadzira yako yekutengesa chinzvimbo, iwe unogona kuigadzirisa iyo nekugadzira iyo inotarisa-inotaridzika maitiro kune ako emangwana vatengi.
Imwe yei makuru ecommerce masaiti kunze uko, maunogona kuwana nekutenga chero chero chigadzirwa chaunogona kufungidzira. Inowanikwa mune dzinopfuura nyika gumi neshanu, ine vanopfuura mamirioni mazana maviri nemakumi mana evashandisi vanoshanda; Amazon yakatanga se, kune chikamu chikuru, chitoro chemabhuku. Asi nekufamba kwenguva yakawedzera, uye nhasi yakanyanya kukwirira pane runyorwa rwemasosi makuru ekutenga online.
Isu tese takanzwa nezve ebay pane imwe nguva kana imwe nguva; Imwe yeiyo internet kutengesa nzvimbo chikuru munyika. Iyo ine vanopfuura mamirioni zana nemakumi mashanu evashandisi vanoshanda uye inozivikanwa kwazvo zvekuti inototaurwa mumafirimu eHollywood. Pane ebay unogona kuwana zvese kubva kumagetsi zvigadzirwa, kumabhuku nemitambo yemavhidhiyo. Pasina kupokana, eBay muenzaniso wakanaka kwazvo weEcommerce pazvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Akanakisa Ecommerce Sites 2016-2017
Nyowani dhizaini matemplate eEcommerce masaiti
Matipi ekugadzirisa Ecommerce mumasocial network